မှိုနှင့်သီးရွက်စုံကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကောက်ရိုးမှို (သို.) ငွေနှင်းမှို
ပန်းဂေါ်ဖီ (သို.) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
အသီးအရွက်တွေကို..အရွယ်ညီလှီးဖြတ်ထားပါ( ဥနီကို တော့မိမိကျွမ်းကျင်
သလို ပုံဖော်လှီးနိူင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ )
ဆားအနည်းငယ်ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးဆူဆူမှာ ဖျောပြီးရေအေးလောင်းအအေးခံထားပါ။ မှိုတွေကိုလည်းထိုနည်းအတူပြုလုပ်ပြီး..သီးသန်.စီထားပါ။
ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာဆီအနည်းငယ်( နှမ်းဆီ၎-၅ စက်လောက်ပါရင်ပိုမွှေး)ကို
အနည်းငယ်မွှေးလာလျှင်...အသီးအရွက်တွေအရင်ထည့်ပါ။ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ခရုဆီ ၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
ဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်( သို.) ရေလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ မှိုတွေကိုလည်းထည့်ပေါင်းပါ။
ဆွဲပေးပါ..( ကော်ရည်ဆွဲချိန်မှာ မီးလျှော့ချထားပါ )